Anjozorobe : Notafihan’ny dahalo ny biraon’ny kaominina, roa maty, iray naratra – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2018 → mai → 11 → Anjozorobe : Notafihan’ny dahalo ny biraon’ny kaominina, roa maty, iray naratra
Anjozorobe : Notafihan’ny dahalo ny biraon’ny kaominina, roa maty, iray naratra
Antso vonjy no ataon’ireo mponina any amin’iny distrikan’Anjozorobe iny. Na hatramin’ny biraom-panjakana aza dia sahin’ireo dahalo mirongo basy mahery vaika notafihana. Vokany, nisy roa maty, iray tamin’ireo fokonolona ary iray tamin’ireo olon-dratsy, olona iray kosa no naratra mafy vaky loha vokatr’izay fanafihan-dahalo izay, nitranga tao amin’ny kaomina Ambongamarina.
Roa andro niaina tao anaty fitantaintana ireo mponina tao amin’ity kaominina ambanivohitra iray ao amin’ny distrikan’Anjozorobe ity. Ny talata teo mantsy, tokony ho tamin’ny dimy ora sy sasany hariva no tonga nanafika ireo mponina tao amin’ny fokontany Amboanonoka ny andian-dahalo mirongo basy mahery vaika. Tsy nanaiky mora izany ireo mponina fa dia namaly bontana ireto mpanafika, eny fa na dia teo aza ny olona iray lavo sy olona iray naratra mafy, vokatry ny fifandonana. Nanao izay faraheriny tanteraka ireo mponina niaro ny fananany hany ka tsy naharitra ela ihany koa dia lany bala ireo malaso ka tsy nahavita namaly tifitra intsony ary nanao tongotra an-katoka nitsoaka. Nahita izany ireo fokonolona dia nirohotra nanenjika ka azo sambo-belona ny iray tamin’ireo olon-dratsy.
Sendra tafaporitsaka indray anefa ity farany. Tsy nanana hery hanenjehana intsony ireo mponina ka niantso vonjy tamin’ny mpitandro filaminana. Ireto farany indray no nanohy ny fikarohana ny ampitson’io, ny alarobia, ary tsy ela dia tratra ilay tafatsoaka. Satria lavitra ihany ny biraon’izy ireo, ny andro rahateo efa hariva dia ny biraon’ny kaominina tao an-tanana no natao ho solon’ny birao nitanana sy nanaovana andrimaso ilay voasambotra. Ny alin’io alarobia io anefa dia nanaovan’ireo dahalo tampody fohy ilay biraom-panjakana. Raikitra indray teo ny fifampitifirana : teo amin’ireo mpitandro filaminana sy ireo mpanafika. Tao anatin’izay sakoroka rehetra izany anefa dia nanao taridositra nitsoaka indray ilay voasambotra. Tsy lasa lavitra anefa dia lavon’ny bala. Nilavo lefona teo ireo mpanafika ary nitsoaka nilefa rehefa tsy naharesy ireto saika hotafihana.
Mirongatra tokoa ity resaka tsy fandriampahalemana ity any an-toerana, izay mampitaraina fatratra ireto mponina any amin’iny distrika iny. Raha tsiahivina tokoa dia vao andro vitsivitsy izay no nisy aina telo nafoy vokatr’izay fanafihan-dahalo izay, tany an-toerana, ary vao tsy ela ihany koa no nisy ilay vehivavy voarasarasa tamin’ny antsy tany amin’iny faritra iny hatrany.